အဆင်သင့်ဖြစ်နေချိန် CSSU အစည်းအဝေးအပိတ်ခံရတဲ့အပေါ် ဘယ်လိုဆက်လုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါသလဲ?? - SHAN News (Burmese)
Home ဆောင်းပါး မေး/ဖြေကဏ္ဍ အဆင်သင့်ဖြစ်နေချိန် CSSU အစည်းအဝေးအပိတ်ခံရတဲ့အပေါ် ဘယ်လိုဆက်လုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါသလဲ??
ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာ ဂျူလိုင်လ ၂၀ ရက်ကနေ ၂၂ အထိ ကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ CSSU သျှမ်းပြည်ညီညွတ်ရေး ကော်မတီအစည်းအဝေးကို မြန်မာစစ်သံမှူးကနေ ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ အစည်းအဝေးလုပ်ဖို့ အသင့်ဖြစ် လူစုံနေတဲ့အနေအထားမှာ အခုလိုပိတ်ပင်ခံလိုက်ရတဲ့အပေါ် CSSU အနေနဲ့ ဘာဆက်လုပ်ဖို့ရှိပါသလဲ။ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားပါသလဲ။ သျှမ်းပြည်ညီညွတ်ရေးကော်မတီ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် စိုင်းလိတ်ကို သျှမ်းသံတော်ဆင့်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး။ ။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ချင်းမိုင်မြို့မှာ သျှမ်းပြည်ညီညွတ်ရေးကော်မတီကနေ အ စည်းအဝေးလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာ ကို မြန်မာစစ်သံမှူးကနေ တားမြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဘာကြောင့်သူတို့တားမြစ်သလဲ။ ဆရာတို့ရဲ့အစည်း အဝေးပြင်ဆင်မှု ကဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ မနေ့က မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ရုံးကနေ CSSU ဥက္ကဌ စဝ်ယွက်စစ်ကိုအကြောင်းကြားလာတယ်။ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ရုံးကနေပြီးတော့ CSSU အစည်းအဝေးလုပ်မယ့်ကိစ္စကို သဘောမတူတဲ့အကြောင်း ကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်း ကြားသိရပါတယ်။ ကန့်ကွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ CSSU ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမျက်မှောက်လုပ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။ နောက်တခုက CSSU ထဲမှာ NCA တနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး စာချုပ်လက်မှတ် မထိုးရသေးတဲ့သူတွေ ပါနေတယ်ပေါ့။ အဲဒီအချက်ကြောင့်မို့လို့ CSSU အစည်းအဝေးလုပ်မယ့်အကြောင်းကိုသူတို့သဘောမတူဘူးဆိုပြီး မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ရုံးကနေ အကြောင်းကြားလာတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ သူတို့အနေနဲ့ ဒီအစည်းအဝေးကို RCSS တခုတည်းအနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကန့်ကွက်စရာမရှိဘူး။ CSSU အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ရပ်ပါလို့တော့မပြောဘူး။ ဒါပေမယ့် ရွှေ့ဆိုင်းပေးပါလို့ အဲလိုအကြောင်းကြားလာတယ်။
အဲတော့ကျနော်တို့က ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကို လေးစားသမှုပြုတဲ့အနေနဲ့ရော နောက်တခုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်းဘဲ အခြေတည်တ့ံပြီးတော့မှ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ရောက်အောင် ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တဲ့ အခုလုပ်မယ့် CSSU အစည်းအဝေးကို မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ တဖက်ကတော့ ကျနော်တို့ဘက်မှာပြောစရာရှိတာက တကယ်လို့ CSSU ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနားမလည်ဘူး။ သေချာလေ့လာချင်တယ်။ နားလည်ချင်တယ် သုံးသပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် CSSU တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းမေးမြန်းလို့ရလျှက်နဲ့ အဲလိုမျိုး မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းမရှိ်ဘဲနဲ့ အဲလိုပိတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာတော့ သိပ်မကောင်းဘူး။
တကယ်တမ်းဖြစ်စေချင်တာ ဖြစ်သင့်တာကတော့ NRPC ကနေပြီးတော့သော်လည်းကောင်း UPDJC ကနေသော်လည်းကောင်း ဒါမှမဟုတ် JICM အစရှိ အဆင့်အဆင့်သောအဖွဲ့အစည်းများ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံတော်အတိုင်အပင်ခံရုံးက တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း သမတရုံး ကနေပြီးတော့ ဒီကိစအပေါ် စုံစမ်းမေးမြန်းပြီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းက ဒီထက်မက လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်မယ်။ ကျနော်တို့သျှမ်းအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လည်းဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမို ပါ၀င်ပြီးတော့ ကူညီအားဖြည့်နိုင်တာပေါ့။ အခုလိုကျနော်တို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို စေ့စပ်သေချာမလေ့လာဘဲနဲ့ တဖက်သတ်အဲလိုမျိုးစွပ်စွဲတာမျိုး ပိတ်ပင်တာမျိုးလုပ်တဲ့အပေါ်မှာတော့ ဒါနောက်နောင်မဖြစ်ရအောင်ကျနော်တို့က NRPC နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှ ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။
မေး။ ။ ဆရာတို့အစည်းအဝေးက ဘာတွေဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ၁- CSSU ရဲ့ချာတာပေါ့။ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ ၊ ၂- လာမယ့် ၂၁ ရာစုပင်လုံမှာဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ ခေါင်းစဉ်ကြီး ၅ ခုရှိတာပေါ့နော် ။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊လူမှုရေး၊မြေယာ သဘာဝသယံဇာတနဲ့ လုံခြုံရေး အစရှိတဲ့ခောင်းစဉ်တွေမှာ သျှမ်းအမျိုးသားတွေအနေနဲ့ တသံတည်း ထွက်နိုင်အောင်လို့ စုစည်းညီညွတ်မှုရအောင်လို့ ရည်ရွယ်ချက် ၂ ခုနဲ့ကျနော်တိို့ ဒီအစည်းအဝေးကိုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ နောက်တခုက နောက်တကြိမ်လုပ်မယ့် ပင်လုံအစည်းအဝေးမှာ ကျနော်တို့ထဲထဲဝင်ဝင် ပါ၀င်နိုင်အောင် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းတဲ့ပုံစံပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအထောက်အကူပြုဖို့သက်သက်ပါ။ အဲ့ကြောင့်မို့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဒီအစည်းအဝေးကိုကျနော်တို့က တားမြစ်ခံရတဲ့အပေါ်မှာတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပေါ့နော်။
မေး။ ။ငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ်ပ့ံပိုးဖို့ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအပေါ် အစည်းအဝေးကို မြန်မာဘက်က စစ်တပ်ဘက်ကဘာကြောင့်တားမြစ်တယ်လို့မြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ နားလည်မှုလွဲလို့ ကျနော်တို့ကိုဒီလိုတားမြစ်တယ်လို့ဘဲယူဆပါတယ်။ CSSU အဖွဲ့အစည်းမှာ ပါ၀င်လုပ်ဆောင်ကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်း အကုန်လုံးဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုချင်ကြတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို ယုံကြည်တယ်။ ဥပမာ NCA လက်မှမထိုးရသေးတဲ့ SSPP/SSA ဆိုရင် ပြည်နယ်အဆင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးသား ။ NCA တခုဘဲကျန်တော့တယ်။ NCA ထိုးဖို့က သူ့မှာကလည်း UNFC အဖွဲ့အစည်းမှာလည်း ပါ၀င်နေတယ်။ UNFC သွားမယ့်လမ်းကြောင်းက NCA လမ်းကြောင်းဘဲ။ အဲတော့ NCA လမ်းကြောင်းကိုလျှောက်လှမ်းနိုင်အောင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ CSSU အဖွဲ့အစည်းအပေါ် ယုံမှားသံသယဖြစ်တာမျိုးကတော့ မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စ ပေါ့နော်။ မြန်မာစစ်သံရုံးအနေနဲ့ အဲလိုမျိုး CSSU အဖွဲ့အစည်းအပေါ် သံသယမရှင်းတဲ့အနေအထားကြောင့်မို့လို့ အခုလိုပိတ်ပင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဘဲနားလည်ပါတယ်ခင်ဗျ။
မေး။ ။ ၂၁ ရာစုပင်လုံ ဒုတိယအကြိမ်မကျင်းပခင်တုန်းက သျှမ်းပြည်အမျိုးသားအဆင့်အစည်းအဝေးလုပ်ဖို့ပြင်ထားတာတွေကိုလည်း ဟန့်တားခြင်းခံရတဲ့အခြေအနေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ CSSU ကျင်းပလိုတဲ့နေရာမှ ကျင်းပခွင့်မရဘဲနဲ့ တောခေါင်တဲ့ သွားလာဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့နေရာမှာသွားပြီးကျင်းပခိုင်းတယ်။ အခု ထိုင်းနိုင်ငံမှာလုပ်ဖို့စီစဉ်တော့ နိုင်ငံကိုကျော်ပြီးတော့မှ ပိတ်ပင်တာတွေရှိလာတယ်။ ဆရာတို့ CSSU ကဘာဆက်လို့ဖို့စီစဉ်ထား လဲခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ သျှမ်းအမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို ဘယ်နေရာမှာဘဲလုပ်ပါ ဘယ်နေရာမှာမလုပ်ရဘူးလို့ NCA ထဲမှာလည်းမပါဘူး။ ဒါက ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရင်ရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်။ အဲ့မှှှာလည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်အောင်ဆိုပြီး ဒီအစည်းအဝေးမှာသုံးသပ်ဖို့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ဒါမယ့်အဲ့အစီအစဉ်အထိရောက်အောင်မသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ အဲတော့ ကျနော်တို့ CSSU ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းပါ၀င်သွားမယ်။ သျှမ်းအမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပေါ်ပေါက်အောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်။ အဲလိုပေါ်ပေါက်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ NRPC နဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ တဆင့်ပြီးတဆင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ နည်းလမ်းမတွေ့တွေ့အောင်ဆက်လက်ရှာသွားဖို့ရှိပါတယ်။
မေး။ ။ ဆရာတို့ဘက်က ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ဖို့ မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်သွားမယ်။ တပ်မတော်သို့မဟုတ်အစိုးရဘက်ကလိုက်ပြီးတော့ တားမြစ်မှုလုပ်နေတယ်။ ဆိုတော့ ဆရာတို့ဘယ်လို နည်းလမ်းနဲ့အလျှော့အတင်းလုပ်ဆွေးနွေးသွားဖို့စီစဉ်ထားသလဲ။ ဒီဟာတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့NCA ကိုအောင်မြင်စေချင်တယ်။ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ပြီးမြောက်စေချင်တယ်။ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုအမှန်တည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုတာ အင်မတန်မှလိုအပ်ပါတယ်။ ၂ ဦး ၂ ဖက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းမပြုဘဲနဲ့တဖက်သတ်ပိတ်ပင်တာမျိုး တဖက်သတ်စွပ်စွဲတာမျိုး တဖက်သတ်ယုံမှားသံသယ စိတ်ထားပြီးတော့မှ ဆက်ဆံကြမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ရေရှည်ရှေ့ဆက်အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကျနော်တိုဘက်ကနေ အဆင့်ဆင့် တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ စာရေးသားတောင်းဆို ဖို့ကြိုးစားသွားမယ်။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂိုလ်အဆင့်အထိပေါ့နော်။ အဲလိုလုပ်လို့မှအဆင်မပြေရင် တပ်မတော်နဲ့တွေ့ဆုံသင့်ရင်လည်း ကျနော်တို့ တွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲတော့ကျနော်တို့ဘက်ကအကုန်လုံးနည်းလမ်းတွေဖွင့်ထားပြီ။ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆွေးနွေးဖို့ ကျနော်တို့ဘက်က အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားပါလျှက်နဲ့ ဟိုဘက်ကအဆင်မပြေသေးလို့ လက်မခံသေးဘူးဆိုရင်လည်း သူတို့ရဲ့အဆုံးအဖြတ်အပေါ်ဘဲမူတည်ပြီးသွားတာပေါ့နော်။
ကျနော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအခက်အခဲဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ကန့်သတ်မှုကြောင့် ကျနော်တို့သွားချင်နေတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို မတည်ဆောက်နိုင်ဘူး။ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအရင်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကိုတခါတည်း ပြင်ဆင်သွားဖို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဆက်ဆံမှုမရှိဘူး။ တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ ယုံမှားသံသယစိတ်တွေနဲ့သွားရင် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လှမ်းဝေးသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင်၊ဖွဲ့စည်းပုံပြင်နိုင်အောင် စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု အတူတည်ဆောက်နိုင်အောင် ကျနော်တို့တဖက်နဲ့တဖက် သဘောထားကြီးစွာနဲ့ ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်။ အရင်မိုင်းဆက်တွေကိုဖယ်ထုတ်ရမယ်။ ဗမာအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမအားလုံး အဲလိုစိတ်ထားရှိမှသာ ရည်မှန်းတဲ့ပန်းတိုင်ကို ရောက်နိုင်မယ်လို့ပြောကြားလိုပါတယ်။
လက်ရှိမှာ CSSU ရဲ့ ဥကဌတာဝန်ကို NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ RCSS/SSA ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်စစ်က တာဝန်ယူထားပါတယ်။